SHUKAANSI SIYAASADEED: Bal ka bogo sida ay siyaasaddu arrimihii qoysaskana u dhex gashay! | Hadalsame Media
Home Madadaalada SHUKAANSI SIYAASADEED: Bal ka bogo sida ay siyaasaddu arrimihii qoysaskana u dhex...
SHUKAANSI SIYAASADEED: Bal ka bogo sida ay siyaasaddu arrimihii qoysaskana u dhex gashay!
(Hadalsame) 06 Nof 2019 – Soomaalidu wax ay siyaasad ku sheegayso, balse marka aad u fiirsato gebi ahaanba wax kale ah ayaa si xun u dardaray, siyaasaddu waxay gaartaa reer calamo kala sita ama ururro reereed kala taageersan. Bal hoos ka eeg shukaansi adeegsanaya eray bixino siyaasadeed.
Wiilkii:- Hallow Walaalo waxaan rabaa inaan Shir Albaabadu u xiran yihiin aan wada yeelano (inaan kulano)
Gabadhii:- Waxba kama qabo waa inoo Beri galab insha allah.
KADDIB MARKII LA KULMAY
Wiilkii:- Walaal weli Dowlad ma soo dhistay (ma lagu Guursaday).
Gabadhii:- Haa Aboowe.
Wiilkii:- Ma lagu Aqoonsaday (Ubad ma Dhashay).
Gabadhii:- Maya Aqoonsi ma jiro Miisaaniyada Dalkuna Hoos bey u dhacday (Biilki ayaa Adkaaday).
Gabadhii:- Mooshin baan ka keenay (Dacwad Furis ah), sidaasaan Cod Aqlabiyad ah kaga guulaystay (Ogolaansho Labada Dhinac ah) ayaan ku kala tagnay.
Wiilkii:- Armaad anigana Mooshin iga keentaa haddii Miisaaniyadda Dalku hoos u dhacdo (Dhaqaale la’aan ytimaado).
Gabadhii:- Maya waxaan kuu samaynaa muddo kKordhin (waan kuu Sabrayaa) waayo waxaan ogaaday in Dawlad la’aani ay Dawlad xumo dhaanto (Nin la’aan iney Nin Xumo dhaanto).
Wiilkii:- Hadda ma ii Codeysay? (Ma i Ogolaatay).
Gabadhii:- Haa weliba waan kuugu Shubayaa (Aniga ayaa ku garab taagan).
Wiilkii:- Hagaag, doorashadeenu sidee bay u dhacaysaa (Meherkeenu) ma Hab deegaan mise 4.5 (mid ay Labada Reerba isugu imaanayaan).
Gabadhii:- Maya ma rabo 4.5 waxaan rabaa Hab deegaan (waan Deriska iyo Asxaabtuba isku arkaan).
Wiilkii:- Ok Insha Allaah waxaan Sugnaaba waa Waqtiga Doorashada (Waqtiga Meherka)
Xigasho: Keenadiid Media
Previous articleGOOGOOSKA: Borussia Dortmund vs Inter Milan 3-2, Chelsea vs Ajax 4-4
Next articleADEEGTO IIB AH: Adeegtooyin ONLINE lagu iibinayo Khaliijka (Google, Facebook, Apple oo lug ku yeeshay) + Muuqaal